Weather in Thailand in May ~ Journey-Assist - Aiza no aleha. Aiza ny vanim-potoana
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Toetany sy toetrandro any Thailandy » Weather in Thailand amin'ny Mey
Weather in Thailand amin'ny Mey
Na dia eo aza ny fihenan'ny turisikan'ny mpizahatany dia tamin'ny volana Martsa-Aprily, tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny fotoam-pialan-tsasatra amin'ny firenena dia mifarana amin'ny faran'ny lohataona, miaraka amin'ny fahatongavan'ny fotoanan'ny orana. Tsy mijanona ny fitaterana ny toetr'andro amin'ny volana Mey any amin'ny faritra samihafa eto amin'ny firenena, satria na dia amin'ny alina aza dia tsy milatsaka ambanin'ny +25 degre ny mari-pana.
Nanomboka tamin'ny tapaky ny volana Mey, dia nahatratra ny faritany ao amin'ny firenena ny hamandoana rivotra mando ny atsimo-atsimo andrefana. Amin'ny faritra maro any Thailand, ny fotoanan'ny orana dia haharitra hatramin'ny faran'ny Oktobra. Raha any avaratra kosa, dia miroborobo ny orana, any amin'ny faritany atsimo sy amin'ny Ranomasin'i Andaman, ny varatra.
Ny faritany avaratra indrindra no mora voageja amin'ny volana monona, izay orana mety ho 3-4 mahery afaka mandalo am-bolana. Mandritra ny fotoana sisa, tara-pahazavana eny an-danitra ny masoandro, manafana ny rivotra manidina ny ala tropikaly mankany amin'ny + 33 ... + 37 degre. Ambany ny fahondriana fa tena sarotra ny mandeha any ivelany mandritra ny andro noho ny hafanana. Eny an-dalambe ao an-tanàna dia feno rivotra fotsiny ny mari-pana amin'ny rivotra sy ny kamory afa-tsy ireo mpanao fialan-tsasatra izay nanapa-kevitra handamina ny dia tany Thailand amin'ny volana Mey.
Any amin'ny faritra afovoan-tany, ny toetr'andro mafana sy mafana dia soloina tsimoramora mando, izay somary mangatsiaka ihany, na dia somary tsy dia lalina loatra aza. Ny mari-pana amin'ny andro dia matetika mahatratra +33 degre. Any Pattaya no orana matetika kokoa any an-drenivohitra. Na izany aza, manana toetra fohy izy ireo, matetika amin'ny tolakandro, ary mandra-mitataovovony ny torapasika sy ny ranomasina dia amin'ny fialan-tsasatra tanteraka amin'ny fialan-tsasatra.
Ny manakaiky ny ekoatera, ny mahery vaika ny fitaoman-jandrona mando. Na eo aza ny morontsiraka na atsimo-atsinanana na any atsimo-andrefan'ny firenena, ny fizaran'ny mari-pana dia mitovy mitovy amin'ny +32 degre mandritra ny andro, ary hatramin'ny +23 degre amin'ny alina. Mafana ny rano ao an-dranomasina, manodidina ny +30 degre, nefa matetika tsy azo vidina ny fidina noho ny onjan-dranomasina lehibe sy ireo zanatampokely izay nanakaiky ny morontsiraka. Eny, ary ny volana Mey, hankafy ny voajanahary ny firenena dia tsy ho tanteraka tanteraka. Matetika no be loatra ny lanitra, feno rahona sy rivo-mahery ny ranomasina.
May Features Features
Ny tena zava-dehibe dia hampifaliana ny mpizaha tany amin'ny faran'ny volana Mey i Thailand, satria amin'ny faran'ny lohataona dia misy fotoana ahafahana mahita toetrandro tsara ary mahavonjy amin'ny fitsangatsanganana ny trano sy ny trano fonenana. Saika ho foana foana ny moron-dranomasina fonenana kely, ny hotely dia manome vidiny mahaliana, tsy misy filaharana fitaterana rano any amin'ireo nosy sy amin'ireo toeram-pizahan-tany.
Na eo aza ny zava-misy fa ny vanim-potoana fohy ao Phuket, ity volana ity dia tena malaza eo amin'ireo tia fanatanjahan-tena amin'ny rano, indrindra ny tsangambato sy ny rivotra, izay loharanom-pitiavana sy onja mahery dia loharanom-pihetseham-po mamirapiratra ary fotoam-pivoriana lehibe. Soa ihany, tsy maharitra any atsimo ny orana tropikaly, misy fotoana foana mandritra ny ora maro isan’andro mba hampandehanana sambo na sambo.
Mazava ho azy, ny orana tsy ampoizina mety hanelingelina fitsangantsanganana mahaliana, fa aza sosotra momba an'io. Ao Thailandy, na inona na aiza toerana misy ny mpizahatany, misy trano fisakafoanana mahafinaritra foana eo akaiky eo izay afaka misakafo matsiro rehefa manaja ny orana.
Aiza kokoa ny miala sasatra any Thailandy amin'ny volana Mey?
5 andro (72.0 mm.)
15 andro (221.0 mm.)
3 andro (57.1 mm.)
7 andro (81.9 mm.)
9 andro (126.7 mm.)
15 andro (221.4 mm.)
5 andro (68.1 mm.)
12 andro (195.1 mm.)
16 andro (301.7 mm.)
10 andro (157.0 mm.)
9 andro (127.5 mm.)
13 andro (193.5 mm.)
15 andro (204.7 mm.)
16 andro (299.5 mm.)
12 andro (203.9 mm.)
7 andro (88.6 mm.)
15 andro (284.7 mm.)
13 andro (174.3 mm.)
7 andro (82.1 mm.)
6 andro (81.2 mm.)
15 andro (220.9 mm.)
15 andro (221.2 mm.)
14 andro (141.9 mm.)
7 andro (85.8 mm.)
9 andro (130.5 mm.)
14 andro (144.5 mm.)
7 andro (87.7 mm.)
8 andro (90.7 mm.)
14 andro (210.1 mm.)
10 andro (157.8 mm.)
7 andro (78.5 mm.)
12 andro (196.0 mm.)
4 andro (82.8 mm.)
19 andro (210.5 mm.)
7 andro (82.0 mm.)
14 andro (280.2 mm.)
15 andro (199.1 mm.)
6 andro (87.1 mm.)
7 andro (88.4 mm.)
4 andro (73.0 mm.)
7 andro (128.0 mm.)
14 andro (157.4 mm.)